छवी-शिल्पा डिभोर्स प्रकरण, लहरो तान्दा पहरो थर्कियो « Intro Nepal
छवी-शिल्पा डिभोर्स प्रकरण, लहरो तान्दा पहरो थर्कियो
Published On : ६ श्रावण २०७६, सोमबार १२:०४
पछिल्लो केही समय यता नेपाली फिल्म क्षेत्रमा नेपाली फिल्मको भन्दा पनि दुई नेपाली फिल्मकर्मीको चर्चाले स्थान पाएको छ । निर्माता छवी ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलको डिभोर्स प्रकरण यती चर्चामा रह्योकी अहिले आएर लहरो तान्दा पहरो थर्किएको अवस्थामा पुगेको छ ।
केही दिन अगाडी नायिका शिल्पा पोखरेलले आफु माथि घरेलु हिंसा भएको भन्दै पति निर्माता छवी ओझा विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिइन् । उनले दिएको उक्त उजुरीसंगै सुरु भएको यो प्रकरण अहिले निर्माता छवी ओझाकी जेठी श्रीमती हेमा ओझाले हालेको बहुविवाहको उजुरी सम्म आइपुगेको छ । छवी शिल्पा डिभोर्स प्रकरणमा हेमा ओझाको इन्ट्री संगै कथाले नयाँ मोड लिएको छ ।
यसरी सुरु भयो छवी शिल्पा डिभोर्स प्रकरण :-
नायिका शिल्पा पोखरेल र निर्माता छवी ओझाले सुरुवाती अवस्थामा आफ्नो सम्बन्ध गोप्य राखेका थिए । उनीहरुले विवाह गरेको स्वीकार गरेको अवस्था थिएन । एक्कासी उनीहरुले ३ वर्ष अगाडी नै विहे गरेको समाचारहरु आउन थाले । ३ वर्ष अगाडी विवाह गरे पनि उनीहरुले विहे दर्ता भने ६ महिना अगाडी मात्र गरेको अहिले थाहा हुन आएको छ ।
सम्बन्धमा रहँदा देखी नै आफु माथी घरेलु हिंसा हुँदै आएको र अन्तत सहन नसक्ने अवस्था आए पछी आफुले प्रहरीमा उजुरी दिएको नायिका पोखरेलले बताउँदै आएकी छिन् । उनले आफ्नो कानको जाली फुट्ने गरी श्रीमान् छवी ओझाले कुटेको आरोप समेत लगाइन् । त्यही आरोपमा मात्र सिमित थिइनन् शिल्पा । उनले आफुलाई मार्ने सम्मको धम्की आएको बताएकी थिइन् । उनको उजुरी पछी प्रहरीले शिल्पा र छवी समेतलाई कार्यालयमा बोलाएर उनीहरु बिचमा सहमती गरायो । छवीले माफी मागेपछी उनीहरु बिच मेल मिलाप भएको थियो ।
मेल मिलाप भएको केही दिनमा डिभोर्स फाइल :-
प्रहरी प्रशासनमा गएर मेल मिलाप गरेर फर्केको केही दिन मै अब आफु श्रीमान् छवी ओझासंग बस्न नसक्ने भन्दै नायिका शिल्पा पोखरेलले सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्धा दायर गरिन् । उनले कुन सर्त वा माग सहित सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्धा दायर गरेकी छिन् भन्ने खुलेको छैन । यद्यपी, बजारमा पचास प्रतिशत सम्पतीको माग सहित शिल्पाले सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्धा दायर गरेको चर्चा चलेको छ ।
शिल्पाले विभिन्न अन्तर्वार्तामा आफुलाई सम्पतीको लोभ नभएको र छुटकारा मात्र खोजेको बताउँदै आए पनि मुद्धा दायर गर्दा सम्पतीको माग गरेको हल्ला चलेपछी उनको आलोचना सुरु भएको छ । धेरैले सम्पती कै लागि शिल्पाले छवीसंग विहे गरेको समेत भन्न थालेका छन् । प्रश्न शिल्पा माथी पक्कै उठ्छ, ‘मेलमिलाप भइसकेपछी एक्कासी किन सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्धा दायर गरिन् ?’
न्यूज फिल्मी संग शिल्पाको त्यो अन्तर्वार्ता :-
डिभोर्स फाइल गरिसके पछी नायिका शिल्पा पोखरेलले संचार संस्था न्यूज फिल्मीलाई एक अन्तर्वार्ता दिइन् जुन् भाइरल नै बन्यो । उक्त अन्तर्वार्तामा शिल्पाको रूहाई देखेर उनको पक्षमा मानिसहरु बोल्न थाले । छवीले शिल्पा माथि अन्याय गरेको आरोप उनीहरुले लगाए । शिल्पाले न्याय पाउनु पर्ने मागहरु पनि उठे ।
तर, त्यही भिडमा शिल्पाले आँसु बगाएर सहानुभूती प्राप्त गर्न खोजेको भन्नेहरु पनि भेटिए । उनले केही हद सम्म सहानुभूती प्राप्त गरेकी पनि हुन् । उक्त अन्तर्वार्ताको अन्त्यमा सम्पतीको मागका बारेमा गरिएको प्रश्नमा शिल्पाले कानुनले श्रीमतीको हिसाबमा दिएको अधिकारलाई आफुले स्वीकार गर्ने बताएकी छिन् । उनको त्यही जवाफले गर्दा पनि धेरैले सम्पतीको लागी शिल्पाले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न चाहेको आँकलन गरे ।
दुवैको मिडिया बाजी :-
शिल्पाले न्यूज फिल्मीलाई अन्तर्वार्ता दिएसंगै छवी र शिल्पाको मिडियाबाजी सुरु भयो । एकले अर्कोलाई आरोप लगाउन मै तल्लिन देखिए उनीहरु । शिल्पाले छवीको विगत आफुलाई थाहा नभएको समेत भन्न भ्याइन् । विशेषत छवी ओझाकी पहिलो श्रीमती हेमा ओझाको बारेमा आफुलाई थाहा नभएको शिल्पाले बताइन् ।
छवीले विगतमा भएको कमी कमजोरीलाई सुधार्दै सम्बन्ध सुमधुर बनाउन चाहेको प्रतिकृयाहरु दिन थाले । उनले शिल्पाले सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्धा फाइल गरेको भए पनि आफु सम्बन्ध बिच्छेद नगर्ने अढानमा रहे ।
हेमा ओझाको इन्ट्री :-
छवी र शिल्पाको डिभोर्सको हल्ला मिडियामा भाइरल भए संगै छवीकी जेठी श्रीमती हेमा ओझा काठमाडौँ आइन् र छवी र शिल्पालाई विपक्षी बनाई उनीहरु विरुद्ध आइतवार गौशाला प्रहरी वृत्तमा बहुविवाहको उजुरी दिइन् । उनको उजुरी संगै छवी शिल्पा डिभोर्स प्रकरणमा उथलपुथल भयो ।
उनले पहिले आफुसंग छवीको अन्य महिलासंग विवाह भएको कागजात नभएकाले आफुले उनी विरुद्ध केही गर्न नसकेको बताउँदै हाल छवी र शिल्पाको विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको फोटोकपी प्राप्त भएकाले उजुरी दिएको बताएकी छिन् । यद्यपी उनले दिएको उजुरी दर्ता भएको छैन । प्रहरीले उजुरीको विषय प्रमाणित भएपछी मात्र दर्ता गर्ने र कारवाहीको प्रकृया अगाडी बढाउने बताएको छ ।
अब के हुन्छ ? :-
अब यो प्रकरणले नयाँ मोड लिन्छ । शिल्पाले हालेको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्धा स्वत बदर हुन्छ र हेमा ओझाले हालेको मुद्धाको प्रकृया अगाडी बढ्छ । हाल हेमा ओझाको उजुरीमा सहयोगी भूमिकामा रहेका अधिवक्ता स्वागत नेपालको भनाईलाई सत्य मान्ने हो भने उक्त उजुरी प्रमाणित भएमा छवी र शिल्पा दुवैलाई ५० हजार जरिवाना सहित ५ वर्ष सम्मको जेल हुन सक्छ । सजाय पाएर पनि शिल्पा र छवीको विवाहले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने छैन । त्यो विवाह नै बदर समेत हुनेछ ।
अब के हुन्छ भन्ने विषयमा इन्ट्रो नेपालले अधिवक्ता स्वागत नेपालसंग गरेको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘छवी जी र शिल्पा जी दुवै जेल जानु पर्ने हुन सक्छ । तर, त्यो तव मात्र हुन्छ जव उनीहरुको विवाह भएको सत्य सावित हुन्छ ।’
पछिल्लो समय आम मानिसमा कुनै पनि श्रीमान् श्रीमती एकसाथ नबसेको ३ वर्ष पछाडी श्रीमान् वा श्रीमतीले विवाह गर्न कानुनले छुट दिएको छ भन्ने बुझाई छ । यदी त्यसो हो भने शिल्पा र छवी जीले विवाह गर्न पाउने अधिकार पनि छ नी भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता नेपालले भने, ‘त्यो गलत बुझाई हो ।’ कुनै पनि श्रीमान् श्रीमती मन्जुरी बेगर अलग भएका छन् भने त्यो अवस्थामा कसैले विवाह गर्छ भने त्यो गैरकानुनी ठहरिन्छ, उनले भने, ‘हेमा जी र छवी जी बिचमा अहिलेसम्म सम्बन्ध बिच्छेद भएको छैन । कानुनत उहाँहरु अहिले पनि श्रीमान् श्रीमती हुनुहुन्छ । श्रीमती भएको अधिकारको प्रगोग गर्दै हेमा जीले बहुविवाहको उजुरी दिनुभएको हो ।’
अधिवक्ता नेपालले यदी छवी र शिल्पाको विवाह दर्ता सक्कली भएको खण्डमा उक्त विवाह दर्ता गर्ने कर्मचारी समेत कारवाहीको भागिदार हुने बताए । एउटा विवाह कायम रहँदा रहँदै अर्को विवाह दर्ता गरिनु कर्मचारीको लापरवाही भएको उनको धारणा थियो ।
गल्ति कहाँ निर पनि छ भने उहाँहरुले विवाह दर्ता काठमाडौँमा गर्नु भएको छ जुन विराटनगरमा हुनु पर्ने थियो, अधिवक्ता नेपालले भने, ‘कि छवी जी र शिल्पा जीले आफुहरुको विवाह नै भएको छैन भन्नु पर्यो त्यो अवस्थामा यो केस नै सकिन्छ होइन भने कारवाहीको लागि तयार बस्दा हुन्छ ।’
अधिवक्ता नेपालले उक्त अन्तर्वार्तामा ब्यक्त गरेको आशयलाई मध्यनजर गर्ने हो भने छवी र शिल्पाले आफुहरुको विवाह भएको हो भन्दा पनि र होइन भन्दा पनि उनीहरु अप्ठ्यारोमा पर्ने प्रस्ट हुन्छ । किनकी विवाह दर्ता सक्कली सावित भए बहुविवाहको मुद्धा खेप्नु पर्ने हुन्छ र नक्कली सावित भए सरकारी सही छाप किर्ते गरेको मुद्धा लाग्न सक्छ वा घुस खुवाएर विवाह दर्ता गरेको हो भने पनि त्यसले धेरैलाई अप्ठेरो पार्ने निश्चित छ ।
अहिले उब्जिएको आशांका :-
अहिले छवी शिल्पा प्रकरणमा हेमा ओझाको आगमन संगै एउटा आशंका उब्जिएको छ । नायिका शिल्पा पोखरेलले आधा सम्पतीको माग सहित सम्बन्ध विच्छेदको मुद्धा दायर गरेपछि छवी ओझाले शिल्पालाई सम्पती नदिन र शिल्पाले हालेको मुद्धा फिर्ता गराउन हेमाको इन्ट्री गराइएको हुन सक्छ भन्ने आँकलन पनि हुन थालेको छ ।
अधिवक्ता स्वागत नेपालको सहयोगमा हेमालाई इन्ट्री गराएर शिल्पासंगको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्धाबाट छुट्कारा पाउन छवी आफैँले यो खेल खेलेको हुन सक्ने आशांका पनि उब्जिएको छ । ‘यो आशंकालाई सही सावित गर्ने आधारहरु न्यून छन् । यो प्रकरणमा सबै भन्दा पिडित हेमा ओझा रहेकाले मैले हेमा जीलाई सहयोग गरेको हुँ र यो उजुरीले कुनै पनि हिसाबमा छवी जीलाई सहयोग पुर्याउँदैन’, अधिवक्ता नेपालले भने ।
अब यो उल्झनका विच छवी-शिल्पा-हेमा प्रकरणले कुन मोड लिन्छ त्यो भविष्यमा थाहा हुनेछ ।
Chhabi र Shilpa लाई ५ वर्ष जेल ? जेठी पत्नीले दिइन् वहुविवाहको उजुरी, वकिलले गरे यस्तो खुलासा